Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis Joo Baayiden Gumi Tokkummaa Mootummaa irratti haasaha yeroo godhan
Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis Joo Baayiden wixata gumi tokkummaa mootummaa irratti akka hoogganaa biyyaatti ennaa dhiyaatan, diplomaasii ilaalcha addunyaa irratti kan fuuleffate kan hunda hirmaachise beeksisu jechuu dhaan angawoonni bulchiinsa isaanii beeksisaniiru.
Angawaan bulchiinsichaa tokko gaazixeesotaaf ibsa kennaniin, prezidaanti Baayidenii fi hooggana isaaniif, waltajjii addunyaa irratti waa’ee naggeenya biyyoolessaa kan Ameerikaa fi nageenya addunyaa maraaf badhaadinaaf dursi kennamuu isaa kan itti beeksisan torrban barbaachisaa dha jedhan.
Ejjennoon kun kalattii dhaan kan prezidaantichi duraanii Doonaald Traamp Ameerikaan Haa dursitu jedhaniin faallaa dha.
Gumiin waggaa kun biyyoota miseensota 193 ta’aniif baraachisummaa rakkoo naannoo fi addunyaa mudate ilaalchisee jiru mari’aichuuf carraa kennaaf.
Baayiden, hoogganoota biyyaa 100 ta’an waliin waajjira haadhoo Tokkummaa Mootummootaatti wal arguuf jecha wixata kaleessaa galgala gara New Yorkitti imalanii jiran.
“Haasaan isaan gumii sana irratti dhageessisuuf jiran, rakkoolee ijoo ta’an dura dhaabbachuuf michootaa fi waaltaalee walitti fiduu dhaan, boqonnaa waraansa waggoota 20 cufnee, boqonnaa dipilomaasii cimaa ta’e banna yaada jedhu irratti fuuleffata.
COVID-19, jijjiirama qilleensaa, teeknooloojii guddataa jiruu fi qajeelfamootaaf daandii daldallii fi dinagdeen irra jiru, bu’uura misoomaa qulqulluu kan malaammaltummaa irraa walaba ta’e irratti maallaqa baasuu, farra shororkeessummaa mala hammayyaan dura dhaabbachuu, kanneen cimoo ta’an waliin dorgommii cimaa geggeessuu malee bara waraana qabbana’aa haaraan itti geggeessamu miti jedhan.